DU'AA'IIN AKKAMITTI QEEBALAMTI - NuuralHudaa
DU’AA’IIN AKKAMITTI QEEBALAMTI
©Ustaaz Jaafar Bayaan irraa
Rabbiin na kadhaa isiniifiin qeebala je’e jira. Garuu kadhaa nuti isa kadhannu akka qeebalamtu seeraa fii heera guutachuu qabduutu jira. Kadhaan qeebalamtu tan seeroota armaan gadii guuttatte:
1. Ikhlaasaan kadhachuu
Du’aa’iin ibaadaadha. Ibaadaan hundi ikhlaasaan hojjatamtu malee hin qeebalamtu. Rabbi qofaaf jecha godhuu fii Rabbi qofa kadhachuutu ikhlaasa. Duaaiin like fii share barbaada godhan like fi share bira hin kuttu. Rabbiin ol tahe akki je’e, “Rabbi qofaaf amantii qulqulleeysaati isa kadhadhaa..” Ghaafir: 14
2. Karaa Nabiyyii sallallaahu aleeyhi wasallam qunnamuu
Rabbi kadhatuun irra caalaa ibaadaati. Irra jaalatamaa waan Rabbittiin dhihaataniiti. Kanaaf karaa Rabbitti dhihaataniin hundi karaa Nabiyyii sallallaahu aleeyhi wasallam itti dalagee karaa godhee wajjiin kan wal simatu tahuu qaba. Rabbiin Nabiyyii sallallaahu aleeyhi wasallam waa hunda keeysatti jala deemaa jechutti nu ajaje. Duaaii keeysattis karaa isaa qabachuun qeebaltiin argama.
3. Yaqiinaan dhugoomsaa kadhachuu
Kan nuti kadhannu eenyuu yoo beeyne abdiin teenyas hangasuma guddatti, yaqiinni keenyas kan shakkii hin qabne taha. Rabbiin nuti kadhannu Allaah! Inni qabaataadha, qabeenyi dachii fii samii keeysa jiru kan isaati. Kaznaan isaa irraa kennamee hin dhumatu, osoo Rabbiin ilmaan namaa hundaaf waan isaan kadhatan hunda kenneef, wanni isa bira jiru hanga lilmoo bishaan baharaa seentee baatuu takka hin irrattu. Kana Rabbiin kee! Maaliif yaqiinaan hin kadhanne!
Rasuulli sallallaahu aleeyhi wasallam akki je’e, “Rabbi kadhadhaa abdii nuuf qeebalama jedhuun (yaqiinaan)” Sunana tirmiizii: 3479
4. Qaamaa qalbiin Rabbiif if gad qabaa, Rahmata isaa kajeelaa kadhachuu
Rabbii waa hunda qabu kadhachaa jirta, Jannanni kan isaatii kajeeluu qabda, azaabni kan isaatii sodaachuu qabda, haala saniin sodaa fii kajeellaa jiddutti harka kee gama isaa ol qabdee abadan harka kee qullaa gad hin deebisu Rahmaan.
Rabbiin warri dhugaan isa kadhatu akkaataa itti isa kadhatan hoggaa himuu akkana je’e, “Isaan kajeeloo fii sodaatoo haala tahaniin nu kadhatan.” Al-Anbiyaa: 90. Haalli kanaan tahuu qaba kadhaan.
5. Jala muranii nin arkadhaan kadhachuu, kadhaas itti jajjabeeysuu
Namni Rabbii isaa kadhatu nin argadhaa jala muree kadhachuu qaba malee naaf hin qeebalamuu sodaataa ykn abdii murachaa kadhatuun hin barbaachisu. Rasuulli sallallaahu aleeyhi wasallam akki je’e, “Tokkoon keeysan hoggaa Rabbi kadhatu haa jala muree kadhatu, yaa Rabbi yoo feete naaf kenni hin jedhin” Bukhaarii fii Muslimii gabaase.
Seeroota kana guuttannee kadhannu Rabbiin haajaa teeny nuuf guuta, sodaa teenya nurraa oofa, duniyaa teenya nuuf tolcha, Jannata isaa nu badhaasa, azaaba hamaa jalaa najaa nu baasa. Kadhaa Rabbii haa jabeeysinu, seeroota kadhaatis haa guuttannu.